NLS | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 3, 2007, 4:02 am
အကိုညီလင်းပြန်လာပြီလို့သတင်းကြားလိုက်တာ ၀မ်းသာမိပါတယ် … ။
“ကိုညီလင်းဆက်”ဆိုပြီး ပလန်းနက်မှာ သူ့ကိုစသိခဲ့တယ် … ။ သူရေးတဲ့စာတွေဖတ်ပြီး သူ့ကိုမေးလ်ပို့ပြီး ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့တယ် .. ။ အဲဒီတုန်းက မလင်းလက်က ဟိုမရောက်ဒီမရောက် တစ်မျက်နှာစာချည်း ရေးနေသူ .. ။ ဖိုရမ်တွေမှာပဲ အသိချင်းဖလှယ်ရင်း အသိတွေလည်းရခဲ့ပါတယ် .. ။
အကိုညီလင်းကို အပြင်မှာမြင်တော့လည်း ခင်ဖို့တော်တော်ကောင်းပါတယ် .. ။ သူနဲ့အကိုဒါဒါကတော့ မြင်ရင် လင်းကိုစိတ်မဆိုးဆိုးအောင် နောက်နေကျလေ .. ။
သူ့ထူးခြားချက်တွေက များတော့ ဘာပြောရမှန်းတော့ မသိပါဘူး ..။ အလေးစားဆုံး ၂ချက်က စာရေးကောင်းတာရယ် ၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်တာရယ်ပါ .. ။ ဟိုလူက ဟိုလိုပြောလို့ ဒီလူက ဒီလိုလာဆွယ်လို့ မလိုက်သွားတတ်တဲ့ သူ့စိတ်ကိုတော့ လေးစားပါတယ် … ။
တချိန်တုန်းက စိတ်တအားဆတ်ပြီး စိတ်လေလွင့်ပြီး သောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းခဲ့ဖူးတဲ့ လင်းကို ဆုံးမစကားတွေပြောခဲ့ပေးပြီး ဖြစ်သင့်တာတစ်ချို့ကိုအကြံပေး ၊ စာရေးတဲ့နေရာမှာလည်း အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါအကို။
လင်းဘလော့ခ်ပေါ်ကနေ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်… ။
အင်းဟုတ်တယ် သူကလူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းတတ်တယ်
Comment by soe zeya March 3, 2007 @ 2:49 pm
u mean NLS came back to Sg or he will write back his blog???
Speak out clearly…
Thks… If NLS write back his blog, pls share us his blog name…
Comment by Anonymous March 5, 2007 @ 8:42 pm
check his old address http://nyilynnseck.blogspot.com !
Comment by LIN LET KYAL SIN March 7, 2007 @ 9:15 am